I-ANC iphika imizamo yokuketula uNzimande | isiZulu
I-ANC iphika imizamo yokuketula uNzimande
UNzimande wagodla umbiko omayelana nemfundo yamahhala
Imbono eyahlukene ngokuphakanyiswe nguMaimane
I-Israel inqabele uNzimande ivisa yokuhambela ePalestine
Johannesburg - Iqembu le-ANC liyaziqhelelanisa namazwi esekela lesibili likanobhala jikelele weSACP uSolly Mapaila, othe ongqongqoshe beKhabhinethi bazama ukuketula uBlade Nzimande.
UMapaila usola ozakwabo baNzimande kwiKhabhinethi nakwi-ANC ngokugqugquzela imibhikisho yabafundi basemanyuvesi, nangokwenza uNzimande abukeke kabi futhi nanjengomuntu ohlulekayo ukwenza umsebenzi wakhe.
“I-ANC iyaziqhelelanisa namazwi ashiwo uComrade Solly Mapaila athi kunamalungu aphezulu e-ANC kanye noNgqongqoshe abafuna ukuketula uNgqongqoshe weMfundo ePhakeme uBlade Nzimande,” kusho i-ANC esitatimendeni.
Funda nalolu daba: Kushone ingane nowesifazane emlilweni
“Ukuphawula okunjena kungase kudale ukungezwani okungenasidingo ebuholini be-ANC nakwiKhabhinethi, kubika i-eNCA.
“Singajabula uma engasinikeza amagama abantu abaqhuba lo mkhankaso akhuluma ngawo.”